The smart ọkà okwu ndu inye ke Christmas | Akụkọ akụrụngwa
Smart okwu na-enye na Christmas
Igweisi ekwe ntị dị ugbua bụ akụkụ dị mkpa nke ngwaahịa ndị a na-ere kwa ụbọchị, nke mere na ha abụrụla otu n'ime ngwaahịa kachasị ere ahịa na ebe ire ere dịka Amazon. N'oge a na dịka anyị ejirila afọ niile nwalee ngwaahịa nke ụdị a, Anyị na-ewetara gị mkpokọta yana ndị nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi ị ga-enye n'oge ekeresimesi. ị ga-atụ uche ya? Ikwesighi ịzụta onye ọkà okwu ọ bụla na-enweghị isi na ntuziaka a doro anya nke anyị kwadebere maka gị na mbụ, gaa n'ihu n'ihi na ị ga-enyerịrị otu (ma ọ bụ ịnata ya).
1 Obere ọkà okwu: Echo Dot (ya na elekere)
2 Kasị vasatail: Smart Ọkà okwu Tetanụ
3 Ezigbo ọkà okwu ịmalite: nkuzi nkuzi 3
4 Sistem Homelọ Kachasị Mma: Sonos Beam
5 Uru kacha mma maka ego: Sonos One
Obere ọkà okwu: Echo Dot (ya na elekere)
Anyị na-amalite site na ụmụntakịrị, n'ihi ọnụahịa ha, ha na-abụkarị ndị mbụ a ga-atụle, Ọ bụ ezie na, dị ka anyị ga-ahụ ma emechaa, ị ga-ahụ na obere ntakịrị (na otu ọnụahịa ahụ) anyị na-achọtakarị atụmatụ dị egwu. Anyị na-amalite site na Amazon Echo Dot na ihe ọzọ ya na elekere elekere, ngwaahịa nke anyị nyochara n'oge na-adịbeghị anya nke mere ka ọ ju anyị anya, ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi ụda ụda ya (nke kachasị njọ na ndepụta na nke a) mana n'ihi ọdịdị ya, ọnụahịa ya na ohere ya, anyị hapụrụ gị vidiyo ka ị nwee ike lelee nyocha anyị:
Zụta Amazon Echo Dot na elekere elekere
Ọgbọ nke atọ ekwughachi Dot abụghị ọganihu na nke gara aga ya, mana ihe nlele nke gụnyere elekere bụ nke na-adọrọ mmasị karị, n'ụzọ dị otu a anyị ga-enwe ike iji ya dịka elekere mkpuchi na tebụl akwa ahụ na nke a bụ karịa karịa echiche na-adọrọ mmasị. Site na euro 34,99 na-eji uru ego ekeresimesi eme ihe Nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ ngwaahịa na-atọ ụtọ, na-elekwasị anya na ịkpọ pọdkastị ma ọ bụ redio, na-enweghị oke mma na ike ụda. Ọ dakọtara na Alexa, Amazon's virtual Assistant.
Kasị vasatail: Smart Ọkà okwu Tetanụ
Energy Sistem ejirila Smart Smart Ọkà okwu mee ihe ruo oge ụfọdụ iji mepụta ngwaahịa ndị nwere Amazon's Alexa virtual Assistant, anyị enyochala ụfọdụ n'ime ngwaahịa ya n'ụlọ a, otu n'ime ndị kachasị ọhụrụ bụ kpọmkwem Ọkà okwu Smart bilie site na usoro ike na-enye ọtụtụ ikike, anyị nwere chaja 5W Qi, USB 10W, elekere mkpuchi na ọkà okwu nwere ọgụgụ isi n'otu ngwaahịa. N'ezie, ọ bụ mmadụ ole na ole ga-enye ọtụtụ atụmatụ na obere ohere, yana iji Ọdụ Okwu Smart a Wake si na Energy Sistem ị nwere ike dochie anya ngwa ngwa niile dị na tebụl akwa gị.
Zụrụ Smart Ọkà okwu Bilie
Ngwaọrụ a zuru ezu Ọ na-efu 79,90 euro ma na Amazon ma na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị site na Sistem Ike. N'ikwu eziokwu, achọtala m na ọ bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ịtụnanya nke afọ a 2019 n'ihe banyere ntụgharị, anyị nwere ọkà okwu stereo nke nwere ike mejupụta ọnụ ụlọ kwesịrị ịdị na nke kwekọrọ na Amazon Alexa, Spotify Jikọọ, airplay na ndị niile kwukwara uru ị ga-atụ anya n'aka ndị dị otú ahụ a na ngwaọrụ. O doro anya na otu nhọrọ kachasị mma ị ga-ahụ na ntuziaka a.
Ezigbo ọkà okwu ịmalite: nkuzi nkuzi 3
Anyị enweela ohere, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, iji nwalee ọgbọ nke atọ Amazon Echo, nke ketara ọtụtụ ihe site na nwanne ya nwoke nke okenye, Amazon Echo Plus, ma e wezụga ụfọdụ atụmatụ dị iche iche dị iche iche dịka ọrụ Zigbee nke ga-ekwe anyị ga-eji ya dịka ebe nweta ngwa. Onye na-ekwu okwu Amazon a natara mmelite kasịnụ ya, n'eziokwu ọ toro ogo mana ọ kwụsịbeghị ịbụ ezigbo ntụsara ahụ, obere na obere obere. Agbanyeghị, ihe tụrụ anyị n'anya karịa ihe niile bụ ihe ndabaghị eziokwu ahụ na ọ nwaggogoro n'ụzọ dị oke egwu n'ihe gbasara ike na nghọta doro anya.
Zụrụ Amazon ikwughachi
Na-enweghị ịbụ ndị Amazon ikwughachi defici a atụmatụ, nke bụ eziokwu bụ na nke atọ emana si 69,99 euro maka ụbọchị ndị a (99,99 euro na ego ọ na-emebu) Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ ịmalite. O zuru ezu iji kpọọ egwu na ijikwa ngwa dịka ọmụmaatụ site na ime ụlọ.
Sistem Homelọ Kachasị Mma: Sonos Beam
El Sonos doo Kemgbe mmalite ya ọ bụ otu n'ime ngwaahịa ndị na-enye ego kachasị mma, nke ahụ bụ na anyị na-ahụ ihe dị n'ile anya bụ ogwe osisi nwere obere njirisi na njirimara mbụ, mana nke karịrị nke ahụ. E wezụga na-arụ ọrụ dị ka ọ bụla Sonos ọkà okwu, ya bụ, na airplay 2, Spotify Jikọọ na n'ezie ya ngwa na-enye anyị a dị ike na elu àgwà ụda, anyị nwere ndakọrịta na atọ isi smart n'ụlọ management usoro: Amazon Alexa, Homelọ Google na Apple HomeKit, ọ bụ n'ezie a gburugburu ngwaahịa.
Zụrụ Sonos Beam
Site n'ịdị mma ya, ọ bụ mmanya maka TV anyị zuru oke, anyị nwere agba abụọ: oji na ọcha, anyị nwekwara ike ikpokọta ya na ndị okwu Sonos ndị ọzọ iji nye ụda dị egwu ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ dabere na ebe anyị debere oke. Nke a Sonos Beam nwere ọtụtụ ngwa, ọbụna kpọgidere ya na mgbidi ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, nọ na a ọnụahịa dị ịtụnanya nke euro 375 (ihe dị ka euro 450 na mbụ) ka ị ghara ida.
Uru kacha mma maka ego: Sonos One
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Smart okwu na-enye na Christmas
Gịnị smart mgbaaka ịzụta inye na Christmas
Etu ị ga - esi gbatị ndụ batrị nke ama gị